#BreakingWarreen kaleessa maqaletti laaqana nyaanna jedhee abjote hundi nyaatamaa jira!Waraana Kibba Tigraayin kaleessa galgala eegalee humnoota Tigraay fi loltoota Nafxanyaa gedduutti taasifamaa tureen ganama kana waranni Tigraay guututti injifannoo labseera.Lola kanaan lubbuun loltoota abiyyii fi nafxanyootaa hedduutu galaafatame. Waraanni shaalaqaan 3 ummataan booji\_'amuu fi kumni hedduun ammas marmafee jiraachuu odeeffanneerra. Kallattiwwan birootin waraanni akkuma itti fufetti jira. MM Abiyyi Ahimad har\_'a sa\_'aa 10:00tti waraanni Maqalee akka galu ajajanii ture. Waraanichi garuu haga amma adeemsa eegaluu akka hin dandeenye himamaa jira. Dhumaatii waraana irra gaheef shakkamuun ajejoonni waraanaa 7 hidhamanii gara Waldiyaatti fudhatamaniiru.Kan biraan immooLoltoonn